La taliyihii Madaxweyne Xasan haddase ah howlwadeen ka shaqeeya xafiiska Nicholas Kay Mr. Nuuradiin Aadan Diiriye oo loo badinaayo inuu noqdo R/W Cusub ee Somalia – idalenews.com
Sida warbaahinta ay ka soo xiganayso saraakiil ka ag dhaw xukuumadda oo codsaday magacooda inaynaan xigan sababo siyaasadeed awgeed waxaa ay sheegayaan in madaxweynaha dawladda Federaalka ee Soomaaliya Md. Xasan Sh Maxamuud oo damacsan yahay in xilka raysalwasaarenimo uu u magacaabi doono Nuuradiin Aaden Diiriye oo ay madaxweynaha isku xulufo siyaasadeed noqdeen bilihii lasoo dhaafay.
Wararka ayaa tilmaamaya in Nuuradiin oo doorashadii la soo dhaafay isku soo taagay xilka madaxtinimo ee Puntland xiriir fiicanna la leh Villa Soomaaliya ayaa lala doonayo in uu u badalo Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Saraakiil xukuumaddaa oo wasiirro ay ku jiraan ayaa sheegay in qorshaha markiisii hore uu ahaa in la kala doorto wasiirka Maaliyada Dowlada Fedraalka Mudane Maxamuud Xasan Suleymaan Cawil iyo Nuuradiin Aaden Diiriye balse hada waxaa xoogeystay in Nuuradiin loo magacaabo xilkaas caqabadaha jira dartood.
“Mida ugu weyn ee magacaabidda Nuuradiin Aaden Diiriye ayaa ah iyadoo xiriir wanaagsan ee dhanka diblu-maasiyaddaa uu la leeyahay hay’adaha iyo beesha caalamka, sidoo kalana uu ka soo jeedo deegaanada Puntland siyaasad ahaana uusan ku tiirsaneyn Madaxweyne Faroole” ayuu yiri Masuulkaan oo Raxanreeb u waramay.
” Sidaas daraadeed waxaan idiin cadeyn karaa gudiga hawshaan faraha kula jira waxaa hada miiska u saaran xilkaan marka laga qaado R/W Saacid in loo magacaabo xilkaas wasiirka 1aad ee xukuumadda DF ee Soomaaliya, in uu isbadal yimaado Ilaah Baa Og” ayuu yiri.
Nuuradiin ayaa ah nin aad u firfircoon hada waxa uu lataliye buuxa u yahay wakiilka qaramada midoobey ee Soomaaliya Nicholas Kay waxa uu qeyb weyn kasoo qaatay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Dowlada Fedraalka iyo Maamulka Jubbaland isaga oo kalin weyn ku lahaa heshiiskii la dhex dhigay Dowlada iyo Hogaanka Jubba.
Hadii xilka laga qaado Raiisul Wasaare Saacid ayaa noqon doona R/Wasaarihii ugu horeeyey oo xilka looga qaado daacanimo uu u yahay Madaxweynaha Soomaaliya.